Xirsi Cali Xaaji oo loo doortay Guddoomiyaha xisbiga Waddani, Maxaan ka naqaan? – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
November 16, 2021 Xuseen 0
Xubnaha xisbiga mucaaradka Somaliland ee Waddani, ayaa u doortay Guddoomiyaha xisbiga Hersi Ali H Hassan, kaddib doorasho goor-dhaweyd ka dhacday hoolka uu ka socdo shirweynaha xisbiga waddani ee magaalada Hargeysa.
1225 Ergay oo ka mid Ergooyinka shirweynaha 2-aad ee Xisbiga Waddani ayaa u codeeyey in Xirsi Cali Xaaji Xasan noqdo Gudoomiyaha Xisbiga Waddani, 9 ergay ayaa diiday, 3 ergayna waa ka aamustay.
Guddoomiye Xirsi Cali oo hadlayay guushiisa ayaa yiri “Waxaan mahad gaar ah u celinayaa Guddoomiye C/raxmaan oo ah aasaasaha xisbigan Waddani iyo C/qaadir Jirde oo ah odayga xisbiga, oo labaduba iga mudnaa xilkan Guddoomiyaha Xisbiga Waddani balse fursaddan i siiyay markii ay eegeen danta xisbiga iyo duruufahooda gaarka ah.”
Hersi Ali H Hassan ayaa kamid ah siyaasiyiinta ugu saameynta badan deegaanada Somaliland, waxaa uu ka tirsanaan jiray xisbi muxaafidka KULMIYE, waxaaana uu xilal kala duwan kasoo qabtay Xukuumadihii Somaliland, isagoo noqday Wasiiru-dowlaha Madaxtooyadda Somaliland, ee xukuumaddii Madaxweyne Axmed Siilaanyo, waxaana uu doorashadii Muuse Biixi kaddib ku biiray xisbiga waddani.
Sidoo kale, Xirsi Cali ayaa ah aqoonyahan iyo qoraa si weyn looga yaqaan deegaanada Soomaaliya, waxaana 5 sano ee soo sota uu hoggaamin doonaa xisbiga mucaaradka ugu weyn ee Waddani.